Izeluleko Ezingu-9 Zokwenza Izethulo Ezisebenza Nge-PowerPoint | Martech Zone
Izeluleko Ezi-9 Zokwethula Izethulo ze-PowerPoint Eziphumelelayo
NgoLwesine, ngoMashi 17, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngilungiselela isethulo engisenzayo cishe amasonto ayi-7 kusuka manje. Ngenkathi ezinye izikhulumi engizaziyo zizophinda isethulo esifanayo esingapheli kaninginingi, izinkulumo zami zihlala zibonakala zisebenza kahle lapho ngi Lungiselela, ukwenza ngokwezifiso, umkhuba futhi ephelele isikhathi eside ngaphambi komcimbi.
Inhloso yami ukungalokothi nginqume ukuthi yini esesibukweni, ukuklama amaslayidi amangalisayo asebenza ngokuhambisana nenkulumo. Lokhu kukhulisa kokubili ukuqonda nokukhumbula. Njengoba cishe uhhafu wabantu uncamela ukuya kudokotela wamazinyo kunokuhlala ngesethulo, ngihlala ngihlose ukwenza amahlaya nawo!
Ngokombiko othile inhlolovo entsha ye-Prezi, 70% yabantu baseMelika abaqashiwe abanikeza izethulo bathi amakhono okuzethula abalulekile empumelelweni yabo emsebenzini
IClémence Lepers isiza amabhizinisi ukwakha ama-crisp, ukukhahlela izimbongolo ezincengela futhi zivale ukuthengisa okuningi. Uhlanganise le infographic ka Izeluleko Ezingu-9 Zesethulo Esiphumelelayo:
Yazi Izilaleli Zakho - Bangobani? Kungani bekhona? Kungani bekhathalela? Yini abayidingayo nabayifunayo?
Chaza Imigomo Yakho - Qinisekisa ukuthi zi-SMART = ezithile, ziyalinganiswa, ziyafinyeleleka, ziyiqiniso, futhi ziqhutshwa isikhathi.
Sakha Umlayezo Ocindezelayo - Yigcine ilula, ikhonkolo, ithembekile, futhi inenzuzo.
Dala Uhlaka - Qala ngesingeniso sokuthi kungani abantu bekhathalela, bachaza izinzuzo, besekela umyalezo wakho ngamaqiniso, gcina umyalezo owodwa owodwa ngesilayidi ngasinye, bese uqeda ngokubizelwa okuthile.
Hlela ama-Slide Elements - Sebenzisa osayizi befonti, ubujamo, umehluko kanye nombala ukudala isithombe.
Yakha Itimu - Khetha imibala namafonti amele wena, inkampani yakho, nesimo sakho. Sizama ukufaka izethulo zethu njengesayithi lethu ngakho-ke kukhona ukuqashelwa.
Sebenzisa ama-Visual Elements - Abantu abangama-40% bazophendula kangcono ekubukweni futhi u-65% agcine imininingwane kangcono ngokubonakalayo.
Hook Izithameli Zakho Ngokushesha - Amaminithi ama-5 yisikhathi sokunaka esimaphakathi futhi izethameli zakho ngeke zikhumbule uhhafu walokho okushilo. Iphutha elilodwa engangivame ukulenza kusenesikhathi ukukhuluma ngezimpawu zami… manje ngishiya lokho kuMC ngiqinisekise ukuthi amaslayidi ami ahlinzeka ngomthelela negunya abalidingayo.
Linganisa Ukusebenziseka - Nginaka ngokushesha ngemuva kwezinkulumo zami ukuthi bangaki abantu abafisa ukukhuluma nami. Amakhadi ebhizinisi amaningi, ukusebenza kwami ​​kungcono! Njengoba abantu behamba ngomakhalekhukhwini, ngiyabakhuthaza nokuthi bangithumelele umqhafazo ukuze ngibhalisele i-newsletter yami (thumela umbhalo othi MARKETING to 71813).
Ekugcineni, ibhizinisi elikhiqizwe ngokushesha kusuka kubabukeli noma kunethiwekhi abakudlulisela kuyo izokhombisa ukuthi uphumelela kangakanani. Ukumenyelwa emuva ekukhulumeni njalo kuhlanganisa, futhi!
Tags: UClémence Lepersamathiphu wesethulo asebenzayoinfographicamathiphu wesethulo sosukuamathiphu asemqokai-PowerPoint infographicamathiphu wesethulo se-PowerPointamathiphu we-PowerPointpptpopisethulo infographicamathiphu wesethuloamathiphu wesethulo infographicukwethulapreziOkhulumayo
I-Scribble Live: Idokhumenti, Hlela futhi usebenzise Isu Lakho Lokuqukethwe
Aug 11, 2016 ngo-6: 01 PM
Ukusebenzisa ukubonwa okusebenzayo kuzogcina izethameli zakho zinesithakazelo. Kepha qiniseka ukuthi awusebenzisi ngokweqile! Bangaphazamiseka uma kuningi kakhulu kubo. Siyabonga ngokwabelana ngamathiphu.